सोधिने प्रश्न -, Dongguan JinRong Aliminum उत्पादन कं, लिमिटेड
तपाईं एक कारखाना वा एक व्यापारिक कम्पनी हो? र मलाई आफ्नो सेवा बताउन?
हामी यस्तो औद्योगिक गैर-मानक सामाग्री, एल्यूमीनियम मुद्रांकन भागहरु, एल्यूमीनियम ओक्सीकरण, गर्मी डुब्नु, एल्यूमीनियम स्क्रू आदि रूपमा, 10 भन्दा बढी वर्षको लागि एल्यूमीनियम प्रक्रिया विनिर्माण मा विशेष गरिएको छ जो एक कारखाना हो
आफ्नो फाइदा र अर्डर प्रक्रिया के हो? त्यहाँ कुनै पनि MOQ आवश्यक छ?
हामी सबै भन्दा राम्रो गुणस्तरको कारखाना मूल्य एल्यूमीनियम प्रशोधनका लागि OEM सेवा प्रदान गर्नुहोस्। आदेश प्रक्रिया तपाईंले हामीलाई रेखाचित्र पठाउन छ, र हामी तपाईंलाई आवश्यक MOQ आधारित तपाईं आफ्नो रेखाचित्र र उद्धरण विश्लेषण हुनेछ। (कुनै MOQ आवश्यक छ, तर सानो मात्रा लागि मूल्य ठूलो मात्रा भन्दा उच्च हुनेछ)
उत्पादन गुणस्तर नियन्त्रण को ग्यारेन्टी कस्तो छ?
हामी गुणस्तर अन्त गर्न धेरै सुरुदेखि नियन्त्रणमा कस र 100% त्रुटि मुक्त मा लक्ष्य पकड। यदि कुनै पनि समस्या छ तपाईं पछि-बिक्री ग्राहक सेवा को लागि आवश्यक सक्नुहुन्छ। हरेक आदेश हाम्रो QC विभाग मार्फत पास हुनुपर्छ ढुवानी अघि।
तपाईं नमूनाहरू प्रदान गर्छन्? यो निःशुल्क वा अतिरिक्त छ?
हो, हामी मुक्त शुल्क लागि नमूना प्रस्ताव सक्छ तर माल को लागत, र हाम्रो उत्पादनहरु गुणवत्ता र प्रविधिको प्रक्रिया जाँच लागि गर्न नमूनाहरू पठाएर उद्देश्य तिर्न छैन।
म प्रोटोटाइप बनाउन आवश्यक भएमा कसरी प्रक्रिया हुन सक्छ?
तपाईं रेखाचित्र वा नमूनाहरू छन् भने, कृपया हामीलाई पठाउन मुक्त, र हामीलाई यस्तो सामाग्री, सहिष्णुता, सतह उपचार र तपाईं आवश्यक रकम आफ्नो विशेष आवश्यकताहरु बताउनुहोस्।
उत्पादनहरु तपाईं कसरी जहाज गर्छन्? तपाईँको वितरण समय कति लामो छ?
नमूना बनाउने लागि जाँदा, सामान्यतया यो5~ 10 दिन छ, तर यो मात्रा र उत्पादनहरु अनुसार छ complicated.We डीएचएल, ईएमएस आदि तिनीहरूलाई जहाज सक्छ ठूलो अर्डर उत्पादनहरु उत्पादन लागि, हामीले तिनीहरूलाई एफओबी द्वारा जहाज हुनेछ , वितरण समय तपाईं जहाज गर्न चाहनुहुन्छ देश मा आधारित छ, तर अनुमानित दिन दिन लगभग 25 छ।
आफ्नो कारखाना कहाँ स्थित छ? म यसलाई कसरी भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ?
हाम्रो कम्पनी शेन्जेन, गुआंगजौ, हांगकांग देखि घनिष्ठ शहर हो जो Jiji औद्योगिक क्षेत्र, Shanghe गाउँ, Wangniudun टाउन, Dongguan शहर, मा स्थित छ।